Tora Type Yangu Yepepa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva pane rakanakisa Rudzi Rangu Pepa Rino mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Dzidza Maitiro Ekutaipa Yangu Nguva Mapepa
Kwangu kwekutanga kuyedza pakudzidzisa maitiro ekutaipa temu rangu bepa kwaive kurova uye kupotsa kutadza. Ini ndakatenga chirongwa online chakavimbisa kubatsira kutaipa bepa rangu kwandiri, asi chakangondipa iro risina chinhu bepa kunyora pairi. Mushure mekunge ndanetseka nekusagona kutaipa nzira yangu kuburikidza nebepa rangu, ndakafunga kutenga bhuku rekuti ndotaipa sei temu pepa rangu. Zvakare, kutsvagurudza kwangu kwakapa zvishoma. Ini ndaive ndichakagumburwa kuti ndonyatsoita sei kuti bepa iri riitwe.
Ndakafunga kutenga e-bhuku maitirwo echirungu mutauro pachinzvimbo. Iri bhuku rainakidza uye raive nemifananidzo yainyatsoita kuti zvive nyore kutevera. Nehurombo, iyo e-bhuku yanga isina ruzivo rwakakwana kuti ini ndinyatso kudzidza. Ini ndaigona kuona kuti munyori aiziva zvaaitaura nezvazvo nekuda kwemifananidzo yakanaka, asi kupfuura ipapo, ini ndakanga ndichiri ndakarasika.
I was now at a crossroad. Ini ndaigona kana kutenga e-bhuku kana kutenga bhuku rekuti ndinga dzidze sei mutauro weChirungu. Ndakafunga kutenga e-bhuku sezvo ndaifunga kuti zvingave nyore kwandiri kuti ndidzidze sezvo yaive yatove pakombuta yangu. Yakauya neCD paunenge uchizvitenga, saka zvese zvandaifanira kuita kuteedzera mafambiro uye ndanga ndakanaka kuenda. Iyo CD yakafukidza chimiro chakakosha chemitsara, girama, uye nyora.
Imwe sarudzo yaive yekutenga bhuku rekuti ndotaipa sei temu rangu bepa. Ini ndaizofanira kutenga bhuku iri pachangu sezvo ini ndanga ndisingawani e-bhuku chero online. Bhuku randakatenga rakauya neCD, zvakadaro. Iyi CD yaisanganisira bhuku rebasa. Ini ndaishandisa bhuku rebasa zvakanyanya, uye ini ndakatanga kudzidza zvimwe zvakajairika zvikanganiso zvinoitwa nevanhu pavanonyora zvinyorwa. Iri bhuku rakauyawo nemabhonasi ekurovedza andaishandisa pandaida kukwesha pamusoro peunyanzvi hwangu hwekunyora.
Mushure mekudzidza kubva mubhuku, yaive nguva yekuita zvakakomba nezvekudzidza kunyora pepa. Saka ndakatenga bhuku racho zvakare. Ino nguva ndaida kutenga iyo 'tuition' sevhisi iyo inopa 'chaiko' zvinyorwa uye kwete chete ekudzidzira mapepa. Ndakafunga kuti sezvo ini ndanga ndichiwana iyo sevhisi sevhisi zvakadaro, hazvingandikuvadze kutenga iyo yekuwedzera tuition. Ini ndakashamisika kwazvo kuti sevhisi yakadhura zvakapetwa kaviri zvakapetwa kupfuura bhuku.
Pane imwe nguva ndapedza mabhuku ese ari matatu, yaive nguva yekunyatsofunga nezvekudzidza kunyora chinyorwa. Ini ndakatenga bhuku repamutemo, raibata zvese musoro wenyaya wandaida kuziva. Mushure meizvozvo, ndakatenga basa rekugadzirisa rondedzero. Basa racho rakandipa gwara rekuverenga kuverenga chinyorwa changu. Mushure meizvozvo, ini ndakangoteedzera iwo mirairo yekunyora yangu yekutanga chinyorwa.
Kunyangwe mushure mekunge ndanyora rondedzero yangu yekutanga, ndakaramba ndichinzwa kuvhiringidzika nekuti ndaisanzwisisa maitiro ekuimisa zvakanaka. Saka ndakatenga software yekugadzirisa rondedzero kuti indibatsire kudzidza zvakawanda nezve kunyora rondedzero yakanaka. Iyo software yakandibatsira kuronga ruzivo rwangu uye kuimisa nenzira yandaigona kunzwisisa. Zvino, ini ndinogona fomati rondedzero yangu mumaminitsi mashanu. Uye ini ndinogona kunyora imwe nyowani mumaminitsi makumi maviri.
Saka kuti ndidzidze kutaipa pepa rangu rematemu, ndaifanira kutenga mabhuku, kutenga software yekugadzirisa-zvinyorwa, uye kutenga basa rekugadzirisa zvinyorwa. Zvese izvo zvaive zvakakosha mutengo wemubhuku. Uye ikozvino, ini ndinogona kunyora mapepa angu pakombuta uye kuendesa iwo ndisinga shungurudzike. Ndiri kudzidza uye kugara ndichigumbuka panguva imwe chete.